Hay Man Thazin – Me and My Garbage … | MoeMaKa Burmese News & Media
Hay Man Thazin – Me and My Garbage …
ကျမနဲ့အမှိုက်များ
ဟေမန်သဇင်၊ ဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၁၃
အမှိုက်နဲ့ ကျမ က ရေစက်ရှိတင်ထင်ပါ့။ အတော်နီးနီးစပ်စပ်ကို ရှိတယ် လို့ ပြောရမယ်။ ဟိုး အရင် ကိုယ် နေခဲ့ တဲ့ အိမ် ကို ညွှန်ပြီ ဆို အဲ ဒီအနီးတ၀ိုက် ကို သိသူ တွေက “သြော် ဒီအိမ် လား.. သိသပေါ့.. ဟို အမှိုက်ပုံ နားက မဟုတ်လား” လို့ ပြန်ပြောတတ် ကြတယ်။ အဲ လို ကြားလိုက်ရရင် စိတ် ထဲ မှာတော့ တယ် မကြိုက်ချင် လှ ဖူး။ နောက် တော့ ဘယ်လောက်တောင် များ အမှိုက်ပုံ နဲ့ ကိုယ် နေသား တကျ ရှိ သွားသလဲ ဆို.. တခါတလေ.. ကိုယ့်အိမ် ကို ညွှန်ရ ခက်ပြီများ ဆို အမှိုက်ပုံ ဆီသာ ရောက် အောင် လာခဲ့စမ်းပါ လို့ တောင် စိတ်ပါလက်ပါ ညွှန်တတ် လာတဲ့ အထိ အမှိုက် ပုံ ဟာ ကိုယ့် ရဲ့ Land Mark ဖြစ် မှန်း မသိ ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ။
မသိစိတ် က ပဲ စွဲ လို့ လား။ မြင် ပါ များတော့ ယဉ် နေ လို့ လားမသိဘူး။ ဘယ် သွားသွား အမှိုက် ပုံ များမြင်မိ ရင် သမင် လည်ပြန် လေးတော့ အနည်းဆုံး ကြည့်တတ် လာတယ်။ ဟိုး ၉၀ ခုနှစ် ကျော် လောက်က ဆို မြောက်ဥက္ကလာ မယ်လမု ဘုရားဖက်ကများ ဖြတ် သွားလိုက် ရင် တောင် လို ပုံနေတဲ့အမှိုက်ပုံ ဟာ သွားရင်းလာရင်း ကိုယ် အမြဲ သတိ ထားမိ တတ်တဲ့အမှိုက် ပုံပေါ့။ သူ့ နားမရောက်ခင် အနံ့ နဲ့ ပြေးလာနှုတ်ဆက် တတ်လို့ လား…. ဒါမှမဟုတ် အသက်များ အောင့် ထား လို့ကြိုပြီးများ အနံ့နဲ့သတိလာ ပေးတတ်လို့ လား တောင် မခွဲခြားနိုင်ပေမဲ့ အဲဒီနား ရောက်တိုင်း အားနာနာ နဲ့အသက် အောင့် ထားရတာတော့ အမှန်။ ဘာလို့ များ အားနာနေရသလဲ ဆို တော့ ကိုယ် က ဖြတ်ရုံ လေး ဖြတ်သွား တာ တောင် အသက်မရှုနိုင်အောင် နံ နေ ပေမဲ့အဲ ဒီ အမှိုက် ပုံ နားမှာတော့ ဈေးရောင်းသူဈေးဝယ်သူတွေနဲ့ ။ သူ တို့ ဆို ဘယ်လို များနေပါ့ မလဲ လို့ တွေးမိတိုင်း ကိုယ့် ဖာသာ အသက်အောင့် တာ တောင် စိတ်မဖြောင့် ဖြစ်ရတယ်။
မမြဲ တဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့လည်ပတ် နေတဲ့လောကကြီးမှာ အမှိုက်ပုံကြီး ကသာ ကိုယ်တို့ အ်ိမ်ရှေ့ မှာ သစ္စာရှိရှိ ဆက်ပြီး ရှိနေခဲ့ ပေမဲ့ ကိုယ်ကတော့ သူ့ ကို ထားပြီး သူနဲ့ ဝေးရာဆီ ထွက်သွားခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ အာရှ ရဲ့ ကျားလို့ နံမည်ကြီး တဲ့ ကျွန်းသေးလေးဆီ ရောက်တော့ အရာရာက တောက်ပြောင်သန့် စင် လို့ ။ မြင် ချင်ပါတယ် ဆို တဲ့အမှိုက်ပုံ ကို ဘယ်လမ်း နံဘေးမှာမှ မတွေ့ ရတော့ အစမတော့ မနေတတ်သလိုလို.. ခိုးလိုးခုလု တောင် ဖြစ်ချင်သလိုလို။ မိုး ထိ မတတ် တိုက်တွေထဲ ကနေ ထွက်လာတဲ့ အမှိုက် ဟူသမျှ ကိုယ့်တိုက် ခေါင်းတွေ ထဲ က လျှော က နဲ လွှတ် လိုက်တာ နဲ့ တင်…. သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဒီဘ၀ ဒီမျှသာ ဖြစ်သွားတော့တာဆိုတော့လဲ…ကိုယ် နဲ့ အမှိုက် ဟာ မီးဝေးချိပ်ပမာ… “အမြဲ လို မဟုတ်ပေမဲ့ လဲ… “ ဇာတ်လမ်း လောက်ပဲ ကျန်နေတော့တယ်။
ဒီဖက်ကို ရောက်လာပြန်တော့ အမှိုက် နဲ့ ကိုယ် ပြန် ပြီး နီးဖို့ ရာ အကြောင်းတွေ ဖန်လာတယ်။ ကျောင်းပြန် တက်တော့ အမှိုက် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရပ်တခု ယူဖြစ်ခဲ့ တယ်။ ဒီမှာတင် ကိုယ်နဲ့ အမှိုက်ရဲ့ရေစက်..နောက်တကြိမ် ပြန်ဆုံ ရ ပြန်တယ်။
အဲဒီတုန်းက ၂၀၀၆ လောက်.. ဒီဖက်မှာ အမှိုက်တွေ ထဲ ကနေ Recycles တွေ ရနိုင်သလောက် ပြန်ဆယ်နေတဲ့ အချိန် ပေါ့။ လူဦးရေ က များလာ။ မြေတွေ က တန်ဖိုး ကြီး ဆိုတော့ တန်ဖိုးကြီးတဲ့မြေ နေရာ တွေ ကို အမှိုက်ပုံ လုပ်ပစ်ဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်မနေ မှသာ လုပ်သင့်တာ မဟုတ်လား။ ဒါ့အပြင် အမှိုက်ပုံ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပဒေတွေ က လည်း ပို ပို ပြီး တင်းကျပ်လာ။ ဒါကြောင့် အမှိုက် ပုံ ဆီသွားမဲ့ အမှိုက်တွေ နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင်၊အမှိုက်ပုံသက်တမ်း ရှည်နိုင်သလောက် ရှည်အောင် ၊ ပြန်ပြီး recycle လုပ်လို့ ရ မဲ့အမှိုက်တွေ ကို တတ်နိုင်သလောက် ပြန်ဆယ် ယူဖို့ ကြိုးစားလာကြတာပေါ့။
ဒါ့ အပြင် အမှိုက်ပုံ ဆိုတာ တခြား စက်ရုံ အလုပ်ရုံ တွေလို ပဲ သူလည်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေနိုင် တာကိုး။ တချို့ စက်ရုံတွေက ရေ ကိုပဲ ညစ်ညမ်းစေနိုင်တယ်။ တချို့ စက်ရုံ တွေကတော့ လေ ထုကို ပဲ ညစ်ညမ်းစေတယ်။ ဒါပေမဲ့အမှိုက်ပုံ ဆိုတာ ကတော့ရေ ရော၊ လေရော။ မြေရော အားလုံးကို ညစ်ညမ်းစေတာ။ အမှိုက်ပုံ ကနေ ထွက်တဲ့gas တွေ ထဲ က မီသ်ိန်း (Methane) တို့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် တို့က အများဆုံး လေထုကို ဒုက္ခပေးနိုင်တယ် မဟုတ်လား။ တခြား အနည်းအကျဉ်း ထွက်တဲ့ ဓါတ်ငွေ့ တွေ လည်း ရှိသေးဆို တော့ အမှိုက်ပုံ ဟာ လေထု ကို ညစ်ညမ်းစေတဲ့တခြားစက်ရုံ တွေလိုပဲ သူ့ ကိုလဲ ဂရုတစိုက် ထိမ်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်တယ်။
အမှိုက်တွေ က နေ ထွက်တဲ့ အရည်တွေကို Leachate လို့ခေါ်တယ်။ အဲ ဒီ အရည်တွေထဲ မှာ ပျော်ဝင် နေတဲ့ဓါတ် တွေ ကို စစ်ဆေးကြည့် ရင် အန္တရာယ် ရှိတဲ့ ဓါတ် တွေ အများကြီး တွေ့ ရ တော့ ဒီမှာ ဆို အမှိုက် တွေ ကို စ မပုံခင် အသေအချာ အထပ်ထပ် အောက်ခံ အကာအရံ တွေ လုပ်ရတယ်။ အဲ ဒီ Leachate တွေ မြေအောက် ကနေ စိမ့် ပြီး မြေအောက်ရေတွေ ဆီ ပျော်ဝင်မသွား အောင်ပေါ့။ အခုအချိန်မှာတော့ ကမ္ဘာကြီးဟာ လောင်စာစွမ်းအင်အတွက် အာရုံစိုက်နေပေမဲ့ နောင် ဆယ်စုနှစ် လောက်ဆို ကမ္ဘာကြီးမှာ သန့် ရှင်းတဲ့သောက်သုံးရေ အလုံအလောက်ရဖို့ ဟာ ပြသနာတရပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ရေ အရင်း အမြစ် တခုဖြစ်တဲ့မြေအောက်ရေ ကို တတ်နိုင်သလောက် ဂရုတစိုက်နဲ့ထိမ်းသိမ်းနေကြတာ။ ဒါ့အပြင် တနေ့ တနေ့ပုံ ပြီးတဲ့ အမှိုက်တွေပေါ်ကို မြေဆွေး ဒါမှမဟုတ် သဲ ဒါမှမဟုတ် တခြား Geomembrane စတာ တွေနဲ့ နေ့ စဉ်ဖုံးရပြန်တယ်။ မိုးရေ တွေထဲ အလွယ်တကူ စီးပါမသွားအောင်။ လေတိုက်ထဲ အမှိုက်တွေ လွှင့်မပါရအောင်ပေါ့။
ပြီးတော့ အမှိုက်ပုံ အတွက် နေရာ ရွေးရတာဟာလည်း အတော့် ကို မလွယ်လှဖူး။ ငလျင်ကြောမှာ မရှိရဖူး။ ကမ်းစပ်ချောင်းစပ် မနီးရဖူး။ လေဆိပ် နဲ့ မနီးရဖူး။..စတဲ့ ရှောင်သင့်တဲ့နေရာ တွေက စာတမျက်နှာစာအပြည့်။ ဒါ့ အပြင် အနီးအနားမှာ ရှိတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒ သဘောထားတွေလည်း ထည့်စဉ်းစားရသေးတယ်။ ပြီးတော့ အမှိုက်ပုံ ဒီဇိုင်း လုပ်တဲ့ အခါမှာလည်း အနည်းဆုံး ၁၀ နှစ် ကနေ ၂၅ ထိ လက်ခံနိုင်မဲ့ နေရာ အကျယ်အ၀န်း၊ လေထု၊ ရေထု ညစ်ညမ်းမှု့ ကို ကာကွယ်ပေးမဲ့အစီအရင်။ ဒါ့အပြင် အဲဒီ ၁၀ နှစ် ကနေ ၂၅ နှစ် အတွင်း ပြောင်းလဲ သွားနိုင်မဲ့ လူမှု့ ဘ၀၊ စီးပွားရေး ပြောင်းလဲမှု့စတာတွေ ကို ပါ ထည့်စဉ်းစားတာတောင် မပြည့်စုံသေးပဲ အမှိုက်ပုံ ကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပိတ်ပြီးသွားတာတောင် ဆက်ပြီးထွက်နေအုံးမဲ့ဓါတ်ငွေ့ တွေ၊ သားငံရည်တွေ ကို နှစ်အတော်ကြာထိဆက်ပြီး စောင့်ရှောက်ရမဲ့ အစီအစဉ် တွေကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာ ဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ဒီဇိုင်းကို အဲဒီနှစ်တွေအတွင်း အပြောင်းအလဲ တွေကြောင့် ပြောင်းလာမဲ့အခြေအနေ တွေ၊ ပြဌာန်းလာနိုင်မဲ့ဥပဒေတွေ စတာတွေပေါ် မူတည် ပြီး လိုက်လျောညီထွေ ပြောင်းစရာရှိ ပြောင်းနိုင်အောင်၊ ဖြည့်စွက်စရာရှိ ဖြည့်နိုင်အောင် လည်း ကြိုစဉ်းစားပြီး ဆွဲထားရမှာဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် အမှိုက်ပုံ တပုံ အတွက် ရင်းနှီးရတဲ့ ငွေအား။လူအား။ နည်းပညာအား ….စတဲ့ အားပေါင်းများစွာ တွေကြောင့် ဒီမှာ Diversion Rate ကို ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်လိုထားပြီး အကောင်အထည်ဖော်ကြတယ်။ Diversion Rate ဆိုတာ အမှိုက်ထဲ ကနေ ဘယ်လောက် % ပြန်ပြီးဆယ်ယူနိုင်မလဲ ကို ပြောတာ။ တချို့ ပြည်နယ်တွေက ၇၀%။ တချို့ က ၆၅%။ ဒီတော့ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက် မှီအောင်နည်းလမ်းမျိုးစုံ စဉ်းစားပြီး အလွယ်တကူ လုပ်နိုင်မဲ့ နည်းတွေ ကို လူတွေဆီ ချပေးရတော့တာပေါ့။
ဟိုတုန်းကဆို Recycle တွေ ကိုတောင် အမျိုးအစားလိုက်သပ်သပ်စီ ထည့်ခိုင်းတယ်။ ဥပမာဆိုရင် စက္ကူ တွေ၊ ကဒ်ထူပုံးခွံတွေ ဆို သပ်သပ်တပုံး။ အအေးဘူးခွံ ဆို သပ်သပ်တပုံး။ ပလပ်စတစ်ဆို သပ်သပ်တပုံး။ ပြန်သုံးလို့ မရတော့တဲ့ အမှိုက်ကိုတော့ တပုံး။ အဲလို စနစ် ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီစံနစ်ရဲ့ အားနည်းချက် တခုက ဘာလဲ ဆို တော့ လိုက်လုပ်ရတဲ့ပြည်သူတွေမှာ ရှုပ်ထွေးမှု့ ကို ဖြစ်စေတယ်။ ဘယ်ဟာ က Recycle ဖြစ်နိုင်သလဲ ဆိုတာ က အစ ဘယ်Recycle ကို ဘယ်ပုံးထဲမှာ ထည့် ရ မှာ လဲ..စတာတွေ ပါပဲ။
ဒါကြောင့် လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ဖို့ဆို ပြီး နောက် စံနစ်အသစ်တခု ပြောင်းလိုက်တယ်။ Recycle နဲ့အမှိုက်သာ ခွဲ။ ဘာ Recyle ဖြစ်ဖြစ် Recycle ဆို တဲ့ ပုံးထဲ သာ ပစ်ထည့်လိုက်။ ကျန်တာ သူတို့ ဖာသာ ခွဲထုတ် မယ်။ လူထု အသိရှုပ်နေစရာ မလိုဘူး ဆို တဲ့ စံနစ်ပေါ့။
အဲဒီစံနစ် ကို ကျင့်သုံး တဲ့ အချိန်.. တချို့ နေရာတွေမှာ အဆင်မပြေ ဖြစ်ကြတယ်။
ဒီမှာက အမှိုက်တွေ သိမ်းဖို့ အတွက် ပုဂ္ဂလိကုမ္ပဏီ တွေကို ကန်ထရိုက်ပေးထားတယ်။ လူထု ကတော့ အဲဒီ ကုမ္ပဏီတွေကို အမှိုက်သိမ်းခ ပေးရတယ်။ အမှိုက်သိမ်းခ က အမှိုက်ပုံး ရဲ့အရွယ်အစားပေါ် မူတည်ပြီး ပေးရတယ်။ အိမ်တိုင်းကို ပုံး ၃ ပုံး ပေးထားတယ်။ ၁ပုံးက Recycle အတွက်။ နောက်တပုံး က ခြံထွက် အမှိုက်တွေအတွက်။ အဲဒီ ၂ပုံးလုံး က ဆိုဒ်ကြီး။ ဂါလံ ၆၀ ဆန့် တယ်။ အဲ အမှိုက်ပုံး ကတော့ ဆိုဒ်အစားစား။ ၃၅ ဂါလံ ပုံး ရှိသလို ဂါလံ ၆၀ ပုံးလည်း ရှိတယ်။ တပတ်တခါ အမှိုက်သိမ်းတာ ဆို တော့ ကိုယ် ထွက်နိုင် တဲ့ အမှိုက်ပေါ် မူတည် ပြီး ဆိုဒ်ကို ရွေးပေါ့။ အဲဒီ ဆိုဒ် ပေါ် မူတည် ပြီး အမိုက်သိမ်းတဲ့ အဖိုး အခ ပေးရတာ။
Recycle ကို တပုံးတဲ ထားတဲ့စံနစ်က တချို့ နေရာတွေမှာ အဆင်မပြေ ဘူးဆိုတာ…တချို့ တွေက အမှိုက် တွေ လည်း များများထွက်တယ်။ ဒါပေမဲ့အမိုက်ပုံး ကို သေးသေး ပဲ ယူပြီး ပိုတဲ့အမှိုက်တွေကို Recylce ပုံးတွေထဲ ထည့်ပစ်လိုက်တယ်။ အမှိုက်ဖိုး ပေးရသက်သာအောင်လုပ်တာပေါ့။ တဖက်မှာ တော့ Recyclesတွေ ညစ်ညမ်းမှု့ ဖြစ်တော့ အမိုက်သိမ်း ကုမ္ပဏီ တွေ အတွက် တွက်ချေမကိုက်ဖူးပေါ့။ ဒီအကြောင်း သတင်းစာမှာ ပါလာတော့ ကိုယ့်ဆရာ က ကိုယ်တို့ အုပ်စုကို Project အနေနဲ့ချပေးပြီး အဲဒီစံနစ်ရဲ့ အားနည်းချက် ၊ အားသာ ချက် အပြင် ပြသနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းသလဲ ဆိုတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အခြေအနေ ကိုပါ လေ့လာစေတယ်။
ဒါနဲ့ ပဲ ကိုယ်တို့ အဖွဲ့ ဟာ အဲဒီမြို့ နယ်ရဲ့မြူနီစပယ်အဖွဲ့ ကို တွေ့ ခွင့် တောင်းပြီး အင်တာဗျူး ကြရတာပေါ့။ အားနည်းချက်တွေရှိသလို အားသာချက် တွေ က ပိုများနေတော့ ဒီစံနစ်ကို မြဲမြံ ဖို့ ပဲ ကြိူးစားကြ တယ် လို့ရှင်းပြတယ်။ ကုမ္ပဏီ နဲ့ အရင်ဆုံး တွေ့ ပြီး လိုအပ်တဲ့ လူထု အသိပညာပေးတွေ ပိုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောတယ်။ လွယ်ကူ တဲ့လမ်းညွှန်စာစောင်တွေ အိမ်တွေဆီ ပို့ သလ၊ို အဓိက ကတော့ အဲဒီ နေရာ ရဲ့မူလတန်း ကျောင်းတွေ မှာ Recycle နဲ့ ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှု့ တွေမှာ ကလေးတွေ ပါနိုင်စေမဲ့အစီအစဉ် တွေလုပ်ခဲ့ ကြတယ် လို့ လဲ ရှင်းပြတယ်။ ကလေး တွေ သေသေချာချာ နားလည်ရင် ကလေးမိဖ တွေ ဆို တာ အလိုလို ပါလာ တယ် မဟုတ်လားတဲ့ ။
ပြီးတော့ ဆက်ပြောသေးတယ်။ သူတို့ တွေ နောက်တဆင့် ကို သွားနေပြီ တဲ့ ။ အဲဒါက မြေဆွေးလုပ်တာ။ အမှိုက်တွေထဲ ကအနိမ့်ဆုံး ၆၀-၇၀% ကို Recycle အဖြစ်ခွဲထုတ် နိုင်ပြီဆို တော့အဲဒီမှာ ကျန်တဲ့အထဲ က ဘယ်လိုဟာတွေကို မြေဆွေးအဖြစ်ဖယ်နိုင်အုံး မလဲ ဆိုတဲ့ အဆင့် အတွက် စီစဉ် နေပြီတဲ့။ ကိုယ့်အတွက်တော့ Project အတွက်လုံလောက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ရ လိုက်တဲ့ အပြင်သူတို့ တွေရဲ့နောက်တဆင့် အရွေ့ ကို ပါ သိလိုက်ရတယ်။
ကိုယ်က ဒီအရွေ့ သစ် လူထုဆီ ဘယ်ပုံဘယ်နည်း ရောက်လာမလဲ လို့သိချင်နေတာ ဆိုတော့ အမှိုက် နဲ့ ပတ်သက်ရင် အမြဲ နားစွင့် နေတတ်တယ်။ ဒီလို နဲ့၂၀၁၀ အကုန်လောက်မှာ ကိုယ့်ဆီ လမ်းညွှန်စာစောင် ရောက်လာတယ်။ ဒါက စားကြွင်း စားကျန်တွေကို အမှိုက်ပုံးထဲ မပစ်ပဲ ခြံထွက်အမှိုက်ပုံးထဲ ထည့် နိုင်ပြီ တဲ့။ ဘယ်လိုဟာမျိူးတွေဆိုတာကို ပုံ လေးတွေနဲ့ပါ ပြထားတော့ သိလွယ်တာပေါ့။ အမှိုက်ထဲက နေ မြေဆွေးဖြစ်နိုင်သမျှကို နောက်ထပ်ကဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့စံနစ်တခုပေါ့။ သိလိုက်ပါပြီ။သူတို့ ရဲ့ အရွေ့ သစ် လူထုဆီ ရောက်လာပြီဆိုတာ။
အဲဒီစံနစ် ကို လူထုထဲ ချမပေးခင် သူတို့ အချိန်ဘယ်လောက်ယူလိုက်သလဲ။ အဲဒီအချိန်ထဲမှာ သူတို့ အသေး စား စမ်းသပ်မှု့ တွေ ဘယ်လောက် လုပ်ခဲ့သလဲ။ ဖြစ်နိုင်ချေတွေ အတွက် ပြင်ဆင်ပြီးမှ လူထုဆီ ကို လမ်းညွှန် မှု့ အပြည့် အစုံ နဲ့ချ ပေးလိုက်တာ…ဒါတွေ ကို ကိုယ်သိလိုက်ရတယ်။ ဒါ့ အပြင် အဲဒီလို လုပ်လိုက်လို့ အမှိုက် ပုံးထဲ အမှိုက်တွေ နည်းလာ မယ် ဆိုတာ အတွက်လည်း ပြင်ဆင်ပြီးသား။ အသေးဆုံး အမှိုက်ပုံးဆိုဒ်ကို ၃၅ ဂါလံပုံး ကနေ အခုတော့ ဂါလံ ၂၀ ဆန့် တဲ့ ပုံး အသစ်တွေပါ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီ။ အဲဒီအတွက်ဈေးနှုံးလည်း လျော့ပြီးသတ်မှတ် ပြီးပြီ။ ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း ဂါလံ ၂၀ ဆန့် တဲ့ ပုံး တောင် ပြောင်းထား ပြီးပြီ။ အမှိုက် သိမ်းခ အများကြီး လျော့ သွားတာမဟုတ်ပေမဲ့ အမှိုက်ပုံးထဲ ထည့်ရတဲ့ အမှိုက် နည်း နည်း သွားတာ မြင်ရတာ ကိုပဲ ကိုယ်ကျေနပ်နေမိတယ်။
ဒီလိုပြောင်းတာ သတိထားမိသလားလို့ကိုယ့်ရဲ့ မိတ်ဆွေ တွေကို မေးကြည့်တော့ သတိမထားမိသူတွေ များတယ်။ အရွေ့ တခုကို ရွေ့ လိုက်မှန်း မသိလိုက်အောင် ရွေ့ လိုက်နိုင်တာကို ကိုယ် မြင်လိုက်ရတာပါပဲ။
အမှိုက်တွေ ကို ဂရုပြုသွားအောင် လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ ကိုယ်ရဲ့ ဟိုးတုန်းက အမှိုက်ပုံကြီး ကိုလဲ ဒီက အမှိုက်ပုံ တွေလို စတိုင်ကျကျနဲ့ စံနစ်တကျ ရှိနေတာကို မြင်ချင်တာတော့ ကိုယ့်ဆန္ဒ အမှန်ပါပဲ။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:Hay Man Thazin, Overseas Burmese